Nagasaki စီရင်စု: အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်စရာများ - Best of Japan
Nagasaki ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းခြံရှိ Nagasaki ငြိမ်းချမ်းရေးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ၏အမြင် Nagasaki Prefecture မှပန်းပုဆရာ Seibou Kitamura = Shutterstock ဖန်တီးသောငြိမ်းချမ်းရေးရုပ်ထု
ကျူရှူးတိုင်းဒေသကြီး! စီရင်စု ၇ ခုတွင်လုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးအရာ >
Nagasaki စီရင်စုတွင်ရှုခင်းအများအပြားရှိသည်။ Nagasaki Atomic Bomb Museum သည် Nagasaki City တွင်တည်ရှိပြီး၊ စီရင်စုရုံးသည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်အနုမြူဗုံးကျဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ Nagasaki City တွင်တောင်စောင်းများစွာရှိသောကြောင့်တောင်မှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။ ညမှာ။
Huis ဆယ်ပါး Bosch ရဲ့
Nagasaki City သည်အံ့ night ဖွယ်ကောင်းသောညရှုခင်း = Shutterstock ကြောင့်ကျော်ကြားသည်
ဓါတ်ပုံများ - Nagasaki City - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောညဥ့်နက်မှုအတွက်နာမည်ကြီးသည်
Nagasaki သည်ဤဆလိုက်တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးရှိဘာသာတရားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများအတူတကွနေထိုင်သောငြိမ်းချမ်းသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ Nagasaki သည်ကိုဘေးနှင့် Hakodate နှင့်အတူ၎င်း၏လှပသောညမြင်ကွင်းကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Kyushu သို့သွားလျှင်ဤမြို့ကိုပျော်မွေ့ပါစေ။ မာတိကာ Nagasaki City ၏ဓါတ်ပုံများ Nagasaki City ၏ပုံ၏ ...
Nagasaki ရှိ Amakusa ကျွန်းများ = Adobe Stock
ဓါတ်ပုံများ - Nagasaki ဒေသရှိ Hidden Christian Sites များ
ဤစာမျက်နှာတွင်ကျူရှူးရှိ Nagasaki ဒေသ၏အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်ုပ်မိတ်ဆက်ပါမည်။ Nagasaki ဒေသတွင်ခရစ်ယာန်များစွာရှိသည်။ ၁၇ ရာစုမှ ၁၉ ရာစုမှခရစ်ယာန်ဘာသာကိုတားမြစ်ထားသည့်တိုင်သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုလျှို့ဝှက်စွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ မာတိကာ၏လျှို့ဝှက်ခရစ်ယာန်ခရစ်ယာန်နေရာများ၏ပုံများ ...
Nagisaki Japan = Shutterstock ရှိ Huis Ten Bosch တွင်ဒတ်ခ်ျလေရဟတ်ဖြင့်သုတ်လိမ်းထားသည့်ရောင်စုံ Tulips များ
ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးအပန်းဖြေဥယျာဉ်များနှင့် Theme Park များ။ တိုကျိုဒစ္စနေးအပန်းဖြေစခန်း၊ USj၊ ဖူဂျီ - Q Highland ...
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းပန်းခြံများနှင့်အပန်းဖြေဥယျာဉ်အချို့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် Osaka ရှိ Universal Studios Japan နှင့် Tokyo Disney Resort တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်တောင်ကြီးကိုကြည့်စဉ်သင်ကစားနိုင်သည့် Fuji-Q Highland ကဲ့သို့သောနေရာများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ဖူဂျီ။ မာတိကာတိုကျိုဒစ္စနေး ...
ဓါတ်ပုံများ - နာဂတ်စကီစီရင်စုရှိ Huis Ten Bosch၊ Kyushu, Japan
Huis Ten Bosch သည်ဂျပန်ရှိ Kyushu ကိုကိုယ်စားပြုသည့်အလွန်ကောင်းသောပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် "ဂျပန်" မဟုတ်၊ နယ်သာလန်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်သည်အနောက်တိုင်းနည်းပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံမှသင်ယူခဲ့ပြီးအထီးကျန်ကာလ၌ပင်သင်ယူခဲ့သည်။ ဤရှည်လျားသောခင်မင်ရင်းနှီးမှုကြောင့် Nagasaki စီရင်စု Sasebo တွင်ကြီးမားသောဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။
Nagasaki စီရင်စုရှိ Gunkanjima ကျွန်း = Shutterstock
ဓါတ်ပုံများ - Nagasaki စီရင်စုရှိ Gunkanjima ကျွန်း
ဒါကစစ်သင်္ဘောမဟုတ်ပါဘူး ဤကျွန်းသည် Kyushu အနောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသော Gunkanjima ကျွန်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က Gunkanjima ပတ်လည်တွင်ကျောက်မီးသွေးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မိုင်းလုပ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတော်တော်များများကအဲဒီမှာနေတယ်။ ယနေ့အချိန်၌ပင်ဂျပန်၏ပထမဆုံးအထပ်မြင့်အိမ်များကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ယခုကျွန်းအားကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ သွားရန် ...
ဆီသို့ပြန်သွားရန် "Kyushu ဒေသ၏အကောင်းဆုံး"
Kagawa စီရင်စု! အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာ
Hyogo စီရင်စု! အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာ
Ishikawa စီရင်စု: အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာ
Oita Prefecture - အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာများ
Tokushima စီရင်စု! အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာ